Naqshadaynta, dhismaha, xeerarka iyo dib u eegista dhammaan noocyada Ciyaaraha - Ikkaro
Qof walba wuu jecel yahay ciyaaraha. Iyo jillaabyo guddi oo wanaagsan. Haddii aad tahay gamer waxaad jeclaan doontaa qaybtaan. Waxaan ahay taageere fudud oo markasta iskudaya waxyaabo badan.
Fikraddu waa in loo qaybiyo qaybta dhawr qaybood. Dhinac, dib u eegis ku saabsan ciyaaraha oo aan tijaabinayo, dhinaca kale, abuurista ciyaaraha iyo ugu dambayn dhismahooda, koobiyeynta, soosaarida qaybaha, waxyaabaha la adeegsanayo, iwm. Wax walba oo DIY ah oo laga ciyaaro.
Waqtigan xaadirka ah oo aan khibrad dheeraad ah u leeyahay ayaa ah xulashada agabka iyo farsamooyinka dhismaha waxyaabaha loo adeegsan karo ballaarinta, abuurista ama wax ka beddelka cayaaraha.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jiri doona boos loogu talagalay taariikhda, xeerarka, macluumaadka iyo casharrada dhismaha looxyada, qaybaha, iwm ee cayaaraha kala duwan ee aan wax ka qabanno, laga bilaabo fasallada Chess, Backgammon, Mankala, Puzzles online, illaa kan ugu casrisan kuwa.
Qaybta gaarka ah ee Daabac oo Ciyaar ;-)
Ciyaaraha dhaqanka ee alwaaxda loogu talagalay dhacdooyinka bannaanka iyo xafladaha
Waxaan horeyba ula kulmay laba jeer sanadkan Ciyaaraha caadiga ah iyo waxqabadyada fuushan ee carruurta inta lagu jiro xafladaha xafladaha tuulada. Waa ciyaaro loox ka samaysan, waxyaabo aasaasi ah oo fudud laakiin way jecel yihiin. Qaarkood inay kaligood ciyaaraan kuwa kalena ay u sameeyaan labo labo ama koox ahaan
Waxaan rabaa in aan xoogaa fuulo xagaaga si aan awood ugu yeesho in aan ula ciyaaro gabdhahayga iyo wiilasha aan adeerka u ahay, anigoo ka faaiidaysanaya keymaha aan haysano ee ku waxyeeloobay banaanka. Maqaalkani waa soo uruurinta kuwa aan awooday inaan sawirro ka qaado iyo kuwa aan ka xasuusto. Waxa jirtay maalin ay dad badani joogeen oo aan sawiro qaadi kari waayey. Dhamaan cayaaraha waxaan ku sameyn karnaa kala duwanaansho fara badan xeerarka iyo kala duwanaanshaha dhismaha. Qoraallada waa xusuusin ahaan.
Waxaad kuheli kartaa jimicsi wanaagsan waxan oo dhan. Ciyaaraha waxaan u kala qaadayaa 2, kuwa xirfad iyo kuwa dhaq-dhaqaaqa iyo isu dheelitirka.
Xeerarka Jenga (Sida loo ciyaaro Jenga)
Jenga Waxaa lagu ciyaarayaa 54 loox oo alwaax ah, dhererkooduna yahay 3 jeer balacdooda. Baloogyadu way isdulsaaran yihiin iyagoo samaynaya munaarad. Dabaq kastaa wuxuu leeyahay seddex baloog, dabaqa korena waxaa la dhigaa dhinaca midig. Sidaa darteed dhamaadka waxaa jira 18 dabaq. Laakiin tani waxay umuuqataa mid aad ugafiican sawirka.
Haddii aad jeceshahay ciyaarta, hubaal sidoo kale waxaad jeclaan doontaa Bausack
Markii taawarka la dhiso, qofka dhisay munaaradda ayaa ciyaarta bilaabaya. Halkan dhaqdhaqaaqyadu waxay ka kooban yihiin qaadashada dabaq kasta oo si hagaagsan loogu dhejinayo dusha sare ee munaaradda. .
Daabac & Ciyaar, sameynta ciyaarta looxa iyo dhaqanka DIY
Dhowr usbuuc ka hor barta twitterka ayaan ka faallooday inay i heleen farshaxanka Daabacaad & Ciyaar, tan iyo markaasna waxaan waday cilmibaaris si aan u arko waxa adduunku bixiyo iyo haddii ay xiiso leedahay in lagu daro Qaybta ciyaaraha
Daabacaadda iyo Cayaarta Waxaan u gudbiyay abuurista ciyaaraha guddiga guud ahaan waana jeclaaday, uma maleynin taas ciyaaraha guddiga waxaa jira adduun u gaar ah oo loogu talagalay DIY.
Waxa ugu yaabka badan ee iga yaabiyay ayaa ah in tiro badan oo su'aalo iyo shaki ah oo dadku qabaan markay abuurayaan qaybo aan awood u leeyahay xallin iyo / ama talo bixin kara Abuur qaybo qaybo alaab jaban ah, ka shaqee qalab kala duwan, iwm. Muddo dheer ayaan wax ka akhrisanayay oo wax ka qorayay, waa inaad ku dabaqdaa oo keliya abuurista ciyaarta.
Rubik's cube 2 × 2 oo ay dhisi doonaan carruurta
Dhowr toddobaad ka hor, David, oo ah macalin dugsi hoose, ayaa ii soo qoray aniga oo i weydiinaya haddii aan ka caawin karo iyaga 2 × 2 rubik nashqadeynta cube ee carruurta.
Waxay doonayeen inay sameeyaan a mashruuc xisaabeed loogu talagalay carruurta agagaarka rubiga Rubik . Isla markiiba waxaan u diray alaabtii uu dhisi lahaa xabadaha rubik magnetic laadhuus, 2 × 2 iyo 3 × 3 laakiin baahidoodu way ka duwanayd oo waxay la yimaadeen dhismeyaal fudud.
Carruurta 10-jirka ah waa inay awoodaan inay dhisaan, sidaa darteed waxaan iska ilaawnaa aaladaha faafaahinta iyo halista leh iyo geeddi-socodka
waana inay noqotaa mid raqiis ah, oo aad u jaban
in kasta oo ay tahay in wax walba la dhaho, waxay kaliya doonayeen saddex jibbaar yar oo la maareyn karo.
Xalkeygu waa tan 2 × 2 Rubik's cube of kartoon iyo warqad magnetic Hadana haddii aad u sameyso fasal waxay kugu kacaysaa € 1,5 halkii jibbaar qiyaastii, haddii aad kaliya dooneyso inaad mid sameyso waxaad aadeysaa € 3 ama € 4
Caqli-galkii 8-da sideed ee la doonayay inuu noqdo 1000
Waxaan muddo dheer joojinnay dhajinta xujooyinka, halxidhaalaha, ciyaaraha ama dhibaatooyinka maskaxda maskaxda jimcaha. Tani waa inay fududahay maxaa yeelay ... Akhri akhriska
Caqliga xun ee kalagoynta 3
Adigana si aad usbuuc wanaagsan uhesho waxaan kaaga tagayaa xujadan yar ee xisaabeed inkasta oo aysan adagayn ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo 1x2x3 rubik's cube
Rubik's Cube hack si aad ugu awoodo inaad ku ciyaarto 3x2x1 cube Waa wax aad iyo aad u xiiso badan, heheej.
Sida loo sameeyo birlab rubik magnetic leh laadhuu
Waxaad jeceshahay tan magnetic Rubik's cube oo lagu sameeyay laadhuu?
Hagaag, qabashadeeda ayaa aad uga fudud tan ay umuuqato ...
MIT - Kitaabka Quduuska ah
Waxaan ku soo lifaaqnay tarjumaadda MIT, dukumiinti loo tixgeliyey inuu yahay Kitaabka Quduuska ah
In kasta oo haddii aad doorbido wax si fiican u muuqda, waa a dukumiinti lama huraan ah waayo bilaabida muftaaxlaha. Waa maado soo jiidatay indhahayga. Haddii aad ka hadasho muftaaxlaha waa gebi ahaanba la oggol yahay, laakiin haddii ereyga furaha uu soo muuqdo, waxay umuuqataa inaad dambi gelayso Laakiin waxaan ka hadli doonaa tan maalin kale ;-)
Dukumentigan waxaad ku baran doontaa
Ciyaarta Joogtada ah
Maanta nasiib ayaan ku helay buuggaygii ESO Design and Technology oo uu qoray James Garratt oo ka socday Akal Ediciones. ... Akhri akhriska
Daabac & Ciyaar